UBUMI BASEMTHETHWENI NGOTYALO-MALI eGeorgia | IXESHA LE-100% LEMPUMELELO | ENGABEKI NXAXOLO | Ipasipoti yesibini yaseGeorgia, Ukufudukela kwezoqoqosho ngokutyala eGeorgia, ubumi ngotyalo-mali eGeorgia, ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali eGeorgia, ubumi ngo-i
Ubumi ngoTyalo mali lwaseGeorgia kunye neGolden Visa
Sinikezela ngeeNkonzo zoFuduko lwezoQoqosho eGeorgia:
● Ukuhlala kwakhona ngokutyala imali eGeorgia
● Ubummi ngotyalo-mali oluvela eGeorgia
● IVisa yegolide eGeorgia
● Ipasipoti yesibini evela eGeorgia
● Ubummi ngotyalo-mali lwe-Georgia ngokutyala imali kwiarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba
Best Abameli bobuRhulumente ngoTyalo mali eGeorgia Kunye namagqwetha ee Ubummi ngoTyalo-mali eGeorgia kunye nabarhwebi bepropathi yokuthengisa izindlu nomhlaba kwiinkqubo zobuzwe eGeorgia zisebenza ngokudibeneyo kukhuseleko lwabathengi.
Ubummi ngeearhente zotyalo-mali zaseGeorgia zibonelela ngeenkonzo zokuhlala ngokutyala eGeorgia, Ubummi ngeenkqubo zotyalo-mali eGeorgia, Ubummi ngenkqubo yotyalo-mali eGeorgia, Ubummi besibini ngotyalo-mali eGeorgia, Ubumi bobabini ngotyalo-mali eGeorgia, ubumi kunye nokuhlala kutyalo-mali eGeorgia. Ubummi ngokusisigxina ngotyalo-mali eGeorgia, Ubumi bethutyana ngotyalo-mali eGeorgia, Ubummi ngesikimu sotyalo-mali eGeorgia, Ubummi ngezikimu zotyalo-mali eGeorgia, Ukuhlala ngotyalo-mali eGeorgia, Ukuhlala kwakhona ngeenkqubo zotyalo-mali eGeorgia, Ukuhlala kwakhona ngenkqubo yotyalo-mali eGeorgia, okwesibini Ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali eGeorgia, ukuhlala kubini ngotyalo-mali eGeorgia, ukuhlala kunye nobumi ngokutyala eGeorgia, ukuhlala kunye nobumi ngokutyala eGeorgia, iinkqubo zokuHlala kwezoqoqosho eGeorgia, ukuhlala kwakhona ngesikimu sotyalo mali eGeorgia, ukuhlala kwakhona ngezikim zotyalo mali eGeorgia, okwesibini ipasipoti eGeorgia, ipas yesibini iinkqubo zemidlalo eGeorgia, inkqubo yokundwendwela yesibini eGeorgia, ipasipoti yesibini eGeorgia, indawo yokuhlala kunye nepasipoti yesibini eGeorgia, ipaspoti yesibini yozakuzo eGeorgia, ipasipoti yesibini kutyalo-mali eGeorgia, ipasipoti yesibini yokuba ngummi eGeorgia, inkqubo yesibini yepasipoti eGeorgia, yesibini Izikimu zokundwendwela eGeorgia, iiVisa zegolide eGeorgia, iiVisa zegolide eGeorgia, iinkqubo zeVisa zegolide eGeorgia, inkqubo yeVisa yegolide eGeorgia, iVisa yesibini yegolide eGeorgia, Inkqubo yesibini yeeVisa zegolide eGeorgia, iiVisa zegolide ezimbini eGeorgia, ubumi kunye neVisa yegolide eGeorgia, ukuhlala kunye ne-visa yegolide eGeorgia, ubumi be-visa obugolide eGeorgia, inkqubo yevisa yegolide eGeorgia, izikimu zevisa zegolide eGeorgia.
"Izisombululo ezi-1 zokumisa" kubo bonke ubumi bakho ngotyalo-mali eGeorgia ngenkxaso eyongezelelweyo.
Ubuncinci botyalo-mali eGeorgia kubumi bobuTyalo-mali: I-USD 125,000 (ilingana ne-300,000 GEL)
Intshayelelo iGeorgia kunye nobumi boTyalo-mali
Funda ngakumbi malunga neGeorgia
Ukuhluma kwabahlali basezidolophini kunye needolophu ezithandekayo, intsimi ethandekayo edibanisa iindawo ezinentaba kunye nolwandle olunentlabathi emhlophe, ukongeza kwimozulu ezolileyo enikezela ixesha ngalinye kula maxesha mane yenza iGeorgia yenye yezona ndawo zintle zihlala eMzantsi. Ngaphezulu kwelizwe, uyakufumanisa ukuphambukiswa okuphezulu, imidlalo enobuchule kunye nokuzonwabisa, kunye neefestile ezinika ukutya kwihlabathi liphela.
Kutheni uhlala kwilizwe laseGeorgia?
Ukufumana ivisa yaseGeorgia
Inyathelo lokuqala lokuxabisa ukuhlala kwilizwe laseGeorgia kukufumana i-visa, ekuye kwaba lula ukuba nayo kule mihla.
Ngenxa yemithetho yaseGeorgia esandula ukuhanjiswa ngo-Septemba ka-2014, kwajika kwalula kakhulu ukufumana i-visa yeshishini lokuhamba ngeentsuku ezimbalwa ngamanqanaba asisiseko kwilizwe lakho nakweliphi na ilizwe laseGeorgia okanye isebe lokuhamba, okanye ungasifaka isicelo Iindlela zewebhu.
Isicwangciso esikhawulezayo, esithembekileyo nesikhuselekileyo sokufumana i-visa ekwi-intanethi yabantu abahamba kakhulu, nangasiphi na isizathu. Ndedwa, okanye nosapho, okanye amaqabane, nokuba yeyonyango okanye yonyango olwahlukileyo.
Uluhlu lokuhlala kwilizwe laseGeorgia
Ngokubhekisele kwimibono yokuhamba, iingcinga, izicwangciso, njengomthetho, sijonga izizwe ngeendlela ezahlukeneyo zobomi, umzekelo, ilizwe elizolileyo, okanye indlela etyebileyo yobomi, okanye ubomi obungenabuganga.
Nangona kunjalo, qinisekisa ukuba iGeorgia inayo yonke into. Umhlangano omangalisayo ubambe umva ukuba uphandwe.
Zininzi iindlela zokuphila kwilizwe laseGeorgia, enye into ukukhupha umdla wakho ngokuhlala kwilizwe laseGeorgia.
Tbilisi, esona sixeko sithandekayo eGeorgia
I-Tbilisi likomkhulu lase-Georgia, isixeko esiqaphelekayo, esinikwe umzekelo ongumzekelo wase-Georgia kunye nezakhiwo zakudala zase-Europe ezinxibelelana nesitayile sentsimi, inetoni yamacandelo oshishino akufutshane kunye neevenkile ezincinci ezifanelekileyo, yintliziyo etshisayo yeGeorgia, kwaye ngokuqinisekileyo , isithandwa sabakhenkethi kunye nendawo yabo yokuqala xa betyelele eGeorgia.
Sisixeko esimangalisayo esinombono ohlanganisa zonke ezinyibilikisa iintliziyo, kunye neendlela zayo ezinqunyelweyo, izikwere eziluhlaza, amachibi, iintlambo eziluhlaza, neegalari, umzekelo, iMyuziyam kaZwelonke yaseGeorgia, eneedipozithi zayo kunye nevumba lembali yakudala yaseGeorgia, Ukuphuma ixesha elifutshane ukuya kwixesha elidlulileyo, nangaphezulu, indlela efanelekileyo yokufumana malunga nembali engemva yaseGeorgia.
Emva kwempembelelo ekhawulezileyo yexesha elidlulileyo, kukho iNqaba yeNarikala eyiyo, esetyenziswe ngamaPersi kunye neTurk emir, becinga ngenkulungwane ye-4Th. Ukuhlala eGeorgia kuyathandeka, ungayonwabela imvakalelo yakho kunye nomoya wakho eChreli Abano eshushu eshushu eshushu eTbilisi ephawuleka kunye nemvula yayo yeSulphur, kwimeko apho unenjongo yokuba nesauna yelinye ilizwe eliqhelekileyo, ukubhukisha kwiwebhu ngaphambi kwexesha kuyacetyiswa.
I-Tbilisi sisixeko esikhulu esisebenzayo, esinezigqibo ezinkulu kunye neminyango evulekileyo yabo bonke abantu abangabamelwane, ababonayo, kunye nenethiwekhi yabangaphandle.
Inani labantu baseGeorgia liphantse libe zizigidi ezi-5, lilungile ngenene, ngaphandle kweendlela ezindala ezibhityileyo, alize lixakeke njengeendawo ezinkulu zasedolophini, umzekelo, iDetroit okanye iLos Angeles.
Isizwe saseGeorgia ekusebenziseni kwakho iradar
Nangona kunjalo, yeyona nto iphambili ukwazi ukuba "Ngaba ukuhlala kwilizwe laseGeorgia kusengqiqweni kubo bonke?"
Zonke izinto eziqwalaselweyo, le “yimibuzo ye-1,000,000 yeedola”, ngokunokwenzeka ehlala kwilizwe laseGeorgia ayisiyonto ithobekileyo okanye ayibizi mali ininzi.
Ixhomekeke kwindlela ophila ngayo kwaye unomdla kangakanani ngokubhekisele kwiindawo ezimangalisayo zaseGeorgia eziqala kwiimarike zakudala zentsimi kunye nakwiivenkile ezincinci ukuya kwiindawo zokulala ezibiza kakhulu ngezitayile zazo ezigabadeleyo.
Imali yaseGeorgia yilari yaseGeorgia.
into eluncedo malunga neGeorgia Lari kukuba isondela kwi-0.35 USD. Iindaba ezikhuthazayo zabahambi ngenkcitho ephantsi, abakhenkethi, kwaye ngokucacileyo nabantu basekuhlaleni nabahlali ngokunjalo. Ukutya kunye neziselo zinengqiqo kwaye zimnandi kwangaxeshanye.
Nokuba kungakumngcipheko wokuba kukutya kwendlela okanye kwiindawo zokutyela ezigqithisileyo. Kwakhona, iihostele zesizwe kunye neendawo zokuhlala ezingamangalisiyo ziphakathi kwaye zilungele isabelo sengonyama. IGeorgia ayinayo eyona ntlawulo iphantsi evunyelweyo ngumthetho. Ngokwoko, ukuhlawulwa kwenyanga ukuya kwinyanga kuvavanywa kwi-500 yeedola zaseMelika. Esi sesinye isiqinisekiso sokuba ukuhlala kwilizwe laseGeorgia kufanelekile kubantu ababini basekuhlaleni kunye neendwendwe.
IGeorgia ixesha elide
Kwinqanaba xa sithetha ngekheshi, ngokunokwenzeka, ibamba iliso leengcali zezezimali, kuthiwani malunga nokujonga kufutshane nakwimeko yemali yaseGeorgia.
Ngaphezulu kwayo yonke enye into, uninzi lwabantu baseGeorgia ngamaGeorgia ama-85% kunye negcuntswana labantu baseArmenia, eAzerbaijan nakwabanye.
Kuya kufuneka sibuyele iwotshi ukuze sibenendawo efanelekileyo kwizithethe ezahlukeneyo zaseGeorgia esinokubona ukuba olu hlanga luye lwabona uluntu oluninzi ukusuka eYurophu yakudala ukuya kwixesha leSoviet.
ubume bayo obonwabisayo, iindidi ngeendidi zemoya, kunye nommandla wayo kuLwandle olumnyama kunye nesitalato sesilika yathwala iGeorgia yaya kwishishini lewayini nakwimisebenzi eyahlukeneyo eyahlukeneyo, umzekelo, ukumbiwa kwezimbiwa ngegolide, isilivere, ubhedu kunye nentsimbi kwiintaba zeCaucasus.
Emva kwexesha leSoviet, oorhulumente baseGeorgia bazamile ukuthatha indawo enkulu yokuzithemba ukuhambisa imeko yayo yemali kuqoqosho olungathintelwanga oluthetha umnyango omkhulu ovulekileyo weengcali ezingaqhelekanga zezemali ukwenza ishishini elizinzileyo kwimozulu yezemali elungileyo emva kwexesha Iimpikiswano ezazifunyenwe ngamaGeorgia kwithuba elide, ngakumbi kwixesha leSoviet.
Yongeza kuloo nto, ishishini lokuhamba kunye namashishini okulima ayachuma ngenxa yeemeko zemozulu, ijografi, kwaye, ngokusobala, uluhlu lwamaxesha kunye neentlanga.
Isizwe esimangalisa kakhulu esinesiseko esimangalisayo kunye neenkonzo ezingalibalekiyo, i-basilicas, i-antiquated fortification, amachibi, kunye namanxweme kunye nemvula yamaminerali eyenza uqoqosho lwaseGeorgia luhamba ngokubanzi ngo-2008 inani leendwendwe liye lagqithisa ngaphezu kwezigidi ezi-4 kunye nokwandisa inyathelo ngenyathelo.
Icandelo lomhlaba eGeorgia
Singatsho ukuba ukubeka imali ngaphakathi kungenye indlela yokungenisa imali ngenxa yexabiso eliphantsi, kodwa ngokubhekisele ekuqeshiseni igumbi elizimeleyo kwimeko yokuba ungumsebenzi okanye ungazi kakuhle, umzekelo, inokukubiza i-200 yeedola zonke inyanga ebiza kakhulu eGeorgia kodwa ngexabiso elifanayo elingenaxesha kunamanye amazwe aseYurophu.
Ukusonga izinto, ukuhlala kwilizwe laseGeorgia kuya kwindawo efanelekileyo, elula, kwaye eqinileyo kuzo zonke izikali.
Iindidi zoluntu zihlala zizala zintsha kwiiplastikhi zepateni ezintsha ngesitayile, ukutya, ukuphambukiswa kwalo naluphi na uhlobo. Nokuba kunjalo, ukutya eGeorgia kuchongwa ngendlela abantu baseGeorgia ababephila ngayo.
Indibano kawonke-wonke yenzelwe ukwenza i "supra" luhlobo lokuvutha olumanyanisa usapho ngalunye ukuba lutye kwaye baxoxe ngemini yabo, kuyacaca ukuba, iwayini yaseGeorgia ibandakanyiwe ukuphucula indlela yesiNtu yokuphila kwilizwe laseGeorgia kwaye iqhotyoshelwe kwi-Oriental Christian yaseGeorgia. ukuchukumisa.
Iinkcukacha ezisisiseko sokuba nguMmi nguTyalo-mali lwaseGeorgia
Ubuncinci botyalomali Ubumi ngokutyala eGeorgia
I-USD 125,000 (ilingana ne-300,000 GEL)
Ubumi ngokutyala imali kwiGeorgia
Ipemethe yokuhlala yotyalo mali
Ukucwangcisa ixesha lokuba ngummi ngotyalo-mali lwaseGeorgia
3 kwiinyanga ze-4
Ngokukhawuleza phantsi kwale nkqubo
Emva kokuhlala iminyaka emi-5
Ubumi obuBini buvunyelwe kubemi baseGeorgia
Iinketho zotyalo mali ze Ubummi ngotyalomali lwe-Georgia
Utyalomali lweshishini langaphandle ngokuthe ngqo kwiziko laseGeorgia kwezi nkalo Ukwamkelwa kweMveliso yezaMandla / iihotele kunye neeRhafu / iiNkonzo zoLungiselelo lwearhente
Kutheni usiya kubumi ngokutyala iGeorgia
IGeorgia imi kwicala elingasempuma loLwandle oluMnyama, oko kuthetha ukuba ibekwe kanye kumda we-Yurophu ne-Asiya. Yindawo efanelekileyo yokushishina okanye ukufuduselwa kwimozulu yayo ethambileyo kunye noqoqosho olukhulayo,., Ukusukela nge-Matshi 2017 abemi bayo banokuya kumazwe aseSchengen ngaphandle kwevisa, nto leyo eyenza ubumi baseGeorgia kwabo bafaka isicelo se-visa elula yeSchengen, iskim Ixabiso elisebenzayo elineendleko, lifumaneka ngomnikelo omnye, wexesha elinye kusapho lonke.
Ukufudukela kosapho eGeorgia
Isicelo sakho sinokubandakanya amalungu osapho lwakho kwangoko, okuthetha ukuba iqabane lakho kunye nabo bonke abantwana abaxhomekeke kuwe abangaphantsi kweminyaka engama-26.
Ubumi Ngenkqubo yotyalo mali eGeorgia
Kwisakhelo senkqubo yokuba ngabemi baseGeorgia, unokuba ngummi waseGeorgia, ukuba wenza umnikelo obalulekileyo kunondyebo welizwe. Le yinkcitho yexesha elinye, engabuyiswayo ephakamisa ubumi
Inkqubo yokwenza isicelo ikhawuleza kakhulu, kuba ukufumana ubumi baseGeorgia yinyanga nje okoko umnikelo kunye nesicelo sifakiwe. Ubumi bobabini abuthintelwanga.
Imali yesibonelelo yi-125,000 ye-euro, nokuba wenza isicelo selungu losapho.
Imfuno yemali yeGeorgia
Ukulungela ukuba ngummi waseGeorgia, kuya kufuneka unikele nge-125,000 yeeYuro (nokuba uyedwa okanye kunye nosapho lwakho). Emva kokugqiba isibonelelo, unokufaka isicelo kwi-Ofisi yokuFuduka kunye nobungqina bokudlulisa.
Inkxaso yabathengi kubuZaleli ngotyalo-mali lweGeorgia
Iqela lethu Ubumi Ngabenzeli botyalo mali eGeorgia kwaye Ubumi ngoTyalo-mali Amagqwetha yeGeorgia ibonelela abathengi kunye neentsapho zabo eGeorgia ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali oluvela eGeorgia, ukuhlala ngokutyala imali evela eGeorgia kunye namanye amathuba otyalo mali, kumazwe angama-37.
Iinkonzo zethu aziphelelanga nje ekuhlaleni ngokutyala imali ukusuka eGeorgia okanye kwiVisa yaseGeorgia yaseGeorgia okanye ubumi ngotyalo-mali oluvela eGeorgia okanye ipasipoti yesibini, sikwanceda nakwezona mali zilungileyo zokufumana izindlu eGeorgia, ukubonelela ngesisombululo esipheleleyo ukuba ufuna ukuseka inkampani IGeorgia okanye i-offshore, izibonelelo zabantu eGeorgia kunye nokunye okuninzi, okubandakanya ukucwangciswa kwemali kunye nokunye okuninzi.
Ukunceda abathengi bethu ngezisombululo ezisekwe kubemi eGeorgia nakwindawo yokuhlala yesibini.
Inkxaso ekhethekileyo yabemi baseGeorgia:
Sibonelela ngexabiso eliphantsi Ubummi ngeenkonzo zotyalo mali IGeorgia, ngokufikeleleka kwethu Utyalo-mali kunye nomthetho wokungena IGeorgia, abarhwebi abavela kwamanye amazwe abafikelelekayo eGeorgia, Ubumi obunokufikeleleka ngabacebisi botyalo-mali baseGeorgia, ubumi obufikelelekayo ngamagqwetha otyalo-mali waseGeorgia kunye nefemi yokubonelela ngokufudukela eGeorgia.
Ubumi ngokutyala imali ukusuka eGeorgia ukuya kumazwe angama-37.
I-visa yegolide eGeorgia kumazwe angama-37.
Ipasipoti yesibini ukusuka eGeorgia ukuya kumazwe angama-37.
Ukufuduka okusekwe kwishishini ukusuka eGeorgia ukuya kumazwe angama-106.
Ubumi ngeenkqubo zotyalo-mali ezivela eGeorgia.
Iinkqubo zevisa zegolide eGeorgia ukuya kumazwe angama-37.
Ubumi ngeenkqubo zotyalo-mali ukusuka eGeorgia ukuya kumazwe angama-37.
Iipasipoti yesibini ukusuka eGeorgia ukuya kumazwe angama-37.
Iinkqubo zokufuduka kweshishini ukusuka eGeorgia ukuya kumazwe angama-106.
Ubummi ngoTyalo-mali lwaseGeorgia ngokuThengisa izindlu
Sibonelela ngenkxaso kutyalo-mali lokuthengiswa kwezindlu kunye nomhlaba eGeorgia ngombono wokuba umthengi kufuneka afumane imbuyekezo entle kutyalo-mali eGeorgia, nanini na, xa befuna ukuphuma kutyalo-mali olwenziwe ngabo ukuba babe ngabemi babo ngokutyala iGeorgia. Sidibene nabaphuhlisi abambalwa bezindlu eGeorgia abanerekhodi elungileyo kwaye ipropathi yabo ikwindawo ezintle eGeorgia, belanda eyona mbuyekezo.
Eyona nkqubo yokuhlala ipropati yaseGeorgia notyalo mali kwizindlu nomhlaba eGeorgia.
Kufuneka wazi-Ubummi base-Georgia ngoTyalo-mali
Ubummi ngeGqwetha loTyalo-mali laseGeorgia liza kubonelela ngoncedo lwamaxwebhu ngokunikezela ngobumi bakho obuyimpumelelo ngokutyala imali kwiGeorgia. Iinkonzo zethu eziqhelekileyo zobuhlali ngoTyalo mali eGeorgia zibandakanya:
Amagqwetha ethu aya kuziqonda iimfuno zakho zokufuduka eGeorgia okanye uye eGeorgia, ngokusekwe kwiziphakamiso ezinokuthi zenziwe
Siqala ngenkuthalo ngenxa yokukhuthazeka, ukulungiselela ingxelo ngaphambi kokuncoma ubumi ngokutyala iGeorgia kubaxhasi ukuze bafumane ubumi baseGeorgia kunye nokunciphisa umngcipheko wokwala.
Ngokusekwe kwingxelo yenkuthalo yeGeorgia, sikwacebisa ezinye iinkqubo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubeke nobumi bakho ngokufaka isicelo sotyalo-mali eGeorgia kuya kufuneka ukuba sikhuphele iikopi zabathengi kunye namalungu epasipoti.
Ukuguqulelwa kunye ne-apostille yamaxwebhu Ubumi besicelo sotyalomali kwi-Georgia. Amagqwetha ethu akhethekileyo oBumi ngokutyala iGeorgia kunye negosa legolide liya kunceda ekugcwaliseni iifom kunye namaxwebhu.
Nje ukuba amaxwebhu obuzwe bakho kunye nawosapho lwakho afake isicelo sokutyala imali eGeorgia, siya kuyizalisa ngabasemagunyeni baseGeorgia.
Ubude bexesha: 3 kwiinyanga ze-4
Nje ukuba isicelo sakho sobumi ngokutyala iGeorgia samkelwe, sabelana ngeendaba ezimnandi nawe kwaye siqala ukulungiselela ezinye inkxaso.
Asibuxhasi okanye sibunike ubummi ngeenkonzo zotyalo-mali eGeorgia kubantu abakhankanywe apha ngezantsi okanye amashishini eGeorgia:
Ubumi ngeenkonzo zotyalo-mali zaseGeorgia azinikezelwa kubaRhwebi okanye abasasazi beengalo kunye neembumbulu ezisuka eGeorgia.
Ubumi ngeenkqubo zotyalo-mali zaseGeorgia azinikezelwa kuhlolo lobuchwephesha eGeorgia okanye kwi-espionage yemizi-mveliso yeenkqubo zotyalo-mali ngaphakathi okanye ukusuka okanye ukuya eGeorgia.
Ubumi ngokubonisana notyalo mali eGeorgia azinikezelwa ngayo nayiphi na into engekho mthethweni okanye yolwaphulo-mthetho eGeorgia.
Ubumi ngenkxaso yotyalo mali yeGeorgia ayisiyonto yabantu abajongana nemathiriyeli yemfuza eGeorgia.
Ubumi ngeenkonzo zotyalo-mali zaseGeorgia ayisiyoshishini elisebenza ngezixhobo ezinobungozi okanye eziyingozi zebhayoloji okanye zenyukliya eGeorgia.
Ubumi ngenkqubo yotyalo mali Inkxaso yeGeorgia ayifumaneki kubantu baseGeorgia abasebenza kurhwebo, ukugcinwa eGeorgia, okanye ukuthuthwa kwamalungu oLuntu.
Ubumi ngotyalo-mali yeGeorgia ayizizo iiarhente zokwamkela abantwana ngokungekho mthethweni.
Ubumi iinkonzo zenkqubo yeGeorgia ayizizo ezenkolo kunye neminikelo yabo yokunceda eGeorgia.
Ubumi ngeenkonzo zotyalo-mali kwi Georgia ayibonelelwa ngabantu abajongana neMifanekiso engamanyala eGeorgia.
Ubumi bethu Amagqwetha eGeorgia abaxhasi ukurhweba ngokuthengisa iziyobisi eGeorgia.
“Isaziso Esibalulekileyo : Izisombululo zeMM INC zithatha amanyathelo okulumkisa ukuqinisekisa amaxwebhu e-AML kubathengi baseGeorgia kunye ne-KYC yabo kodwa asamkeli naluphi na uxanduva kuko nakuphi na ukwaliwa kwabasemagunyeni eGeorgia ukuvunywa kwesicelo Ubumi ngotyalo-mali eGeorgia.
Ubumi ngokutyala eGeorgia nakwamanye amazwe, kunye nezinye izinto ezininzi ezixhasayo.
Sibonelela ngobumi obuBalaseleyo ngenkxaso yotyalo-mali eGeorgia yotyalo-mali, ukufudukela kwelinye ilizwe kunye nokucwangciswa kwezindlu kunye nomhlaba eGeorgia.
Ixhaswe bubumi bamazwe aphesheya ngamava otyalo-mali kunye neemfuno zomthetho waseGeorgia, senza ezona zisombululo zilungileyo.
Ubumi bethu ngeenkonzo zotyalo-mali zaseGeorgia zibonelela ngexabiso elinexabiso eliphantsi, ngezinga elifanelekileyo lempumelelo eGeorgia.
Sithathe iminyaka yamava kubumi bobuGcisa baseGeorgia abaxhasa abathengi kunye neentsapho zabo eGeorgia.
Ubumi obunamava ngabaceli botyalo-mali baseGeorgia kunye nabameli bezomthetho eGeorgia ababonelela ngenkxaso kubaxhasi.
Sinezona solicitors zibalaseleyo kunye neearhente zenkqubo yokuphatha yaseGeorgia kunye nesicelo esizinikele kwimpumelelo yakho.
Ngaphambi kokuba ube ngummi waseGeorgia nasemva kokuvunywa, ilungu lethu leqela eliphambili liya kuba lapho ngeshishini okanye ngenkxaso yobuqu eGeorgia
Sinamava aphesheya kubuMmi ngotyalo-mali kubandakanya iGeorgia, ukunceda abathengi abavela kwihlabathi liphela ngeenkonzo ezilungileyo.
Kwimeko apho ubummi bakho ngokutyala imali ukuya eGeorgia kuyasilela, kukho amanye amazwe angama-36 esiwasebenzisayo, sikulungele ngesicwangciso B.
Bala iindleko zoBumi ngokuTyala eGeorgia
Ukubala iindleko zobumi ngokutyala iGeorgia nceda ugcwalise zonke iinkcukacha kubandakanya amalungu osapho kunye nobudala babo. Ngenxa yenani elikhulu labathengi baseGeorgia, siyakwazi ukubonelela ngeenkonzo ezingcono ngexabiso eliphantsi. Ukubala kuya kubandakanya, kubandakanya, iindleko zoBumi njengenkqubo yotyalo-mali yaseGeorgia kunye nezinye iindleko.
Iintlobo ze ivisa yeGeorgia
Inkqubo yemvume yokusebenza eGeorgia
Ukuhlala okwethutyana eGeorgia
Indawo yokuhlala eGeorgia
Izindlu zoonozakuzaku kunye nabameli baseGeorgia
Ubumi ngoTyalo-mali eGeorgia kunye nezinye iinkonzo
Sibhale ezinye iinkonzo ezimbalwa esizibonelelayo eGeorgia ukulungiselela iimfuno ezikhawulezileyo okanye ezizayo.
Ukuba uceba ukuhambisa usapho lwakho uye eGeorgia ngokutyala, thina njengeqabane lakho laseGeorgia, sikhona ukubonelela ngezinye iinkonzo ezininzi kunye nexesha onokufuna ngalo eGeorgia ngamaxabiso afikelelekayo.
Ngaphandle kobummi ngokubonisana notyalo mali eGeorgia, sibonelela ngeshishini, i-IT kunye neenkonzo zeHR nakwiGeorgia, ongazukuyifumana phantsi kwesambrela esinye esibonelelwe ngabaphi na abanye abacebisi baseGeorgia abasenza ivenkile yokumisa i-Georgia kunye namazwe ayi-106.
"Sityala iminyaka yokulinga kunye nehlabathi jikelele kumazwe angama-106 ukunceda iintsapho, abantu, kunye neshishini laseGeorgia ekufezekiseni iinjongo kunye neminqweno yabo."
Siyayixhasa indlela yabathengi bethu engaphaya kobumi ngokutyala iGeorgia ngoncedo lwamagqwetha ethu, abacebisi kunye nokudibana eGeorgia nakwamanye amazwe.
Singakunceda bhalisa inkampani eGeorgia okanye amazwe ase-Offshore kunye namazwe angama-106 (Iindleko zokubhalisa inkampani eGeorgia zitshiphu kunye nathi.)
Iakhawunti yeBhanki eGeorgia
Nawuphi na umtyalomali ofudukela eGeorgia uya kuyidinga iakhawunti yebhanki yakho eGeorgia kunye neakhawunti yebhanki yenkampani eGeorgia, sinokunceda kwiiakhawunti zebhanki ezingaselunxwemeni.
Isango lokuhlawula eGeorgia
Ngaba ufuna ukubonisana eGeorgia, kuba Izisombululo zentlawulo yedijithali eGeorgia Njengendlela yokuhlawula yesiko okanye yefintech eGeorgia okanye kwizisombululo ze-crypto, masixelele.
Emva kokuba ngummi ngotyalo-mali ukuze IGeorgia ukuba uceba qala ishishini ngokuthenga ishishini esele likho eGeorgia ukuqala kwangoko eGeorgia.
Iinkonzo ze-HR eGeorgia
yethu Inkampani yabasebenzi eGeorgia inokukunceda ngokugaya abasebenzi ngokukhawuleza. Unako kwakhona izithuba ezikhoyo eGeorgia free.
Iinombolo zeFowuni ezinyanisekileyo zaseGeorgia
Iinkqubo zeefowuni zeshishini zaseGeorgia kunye amanani abonakalayo eGeorgia Amazwe angama-102 kunye nezixeko ezingama-291.
Iinkonzo zoCwangciso lwezeMali eGeorgia
Accounting, ngenxa yenkuthalo eGeorgia kunye okuninzi kakhulu.
Idilesi yeOfisi eyiyo eGeorgia
Ukuseta ishishini eGeorgia
Emva kokuba ngummi ngotyalo-mali eGeorgia, ukuseta ishishini kwi Georgia.
Sinikezela ngezisombululo ezisezantsi ze-IT eGeorgia
Uyilo lwewebhu eGeorgia
Uphuhliso lwezorhwebo eGeorgia
Uphuhliso lwewebhu eGeorgia
Uphuhliso lweBlockchain eGeorgia
Uphuhliso losetyenziso eGeorgia
Uphuhliso lweSoftware eGeorgia
Amagqwetha oBumi ngoTyalo-mali eGeorgia
Sibonelela ngobumi bobuMthetho ngezisombululo zotyalo mali eGeorgia kwaye impumelelo kubaxumi bethu ibaluleke kakhulu, eGeorgia, siziinkokheli, ifemu yethu yezomthetho eGeorgia ineearhente zokufudukela eGeorgia. Izisombululo ezicacileyo zotyalo-mali kubantu baseGeorgia kunye neentsapho zabo. Ubumi bethu liqela lotyalo-mali laseGeorgia libonelela ngezisombululo eziyilwe ngempumelelo yabathengi.
Amalungu osapho lwakho (abantwana, inkosikazi, abazali) banelungelo lokufumana imvume yokuhlala eGeorgia, kwimvume yakho yokuhlala eGeorgia yamkelwe.
Amandla egqwetha laseGeorgia ayafuneka kuwo onke amanyathelo asemthethweni egameni lakho ngoBumi bobuGqwetha ngotyalo mali eGeorgia. Ukuba useGeorgia okanye uceba ukutyelela iGeorgia, sinokufumana amandla akho egqwetha apha.
Asibizi mali ingaphezulu ngokufumana Amandla egqwetha. Ukuba uceba ukuqala ubhaliso lwenkampani eGeorgia ukude, amandla akho egqwetha kufuneka abhaliswe ngokusemthethweni ukuba asetyenziswe kummandla waseGeorgia. Kuxhomekeke kwilizwe ohlala kulo, kufanele ukuba ukhubeke okanye ubhaliswe ngokusemthethweni ngummeli waseGeorgia.
Imibuzo ebuzwa rhoqo- Ubumi ngoTyalo mali eGeorgia
Iyintoni inkcazo yokuhlala ngokutyalomali eGeorgia?
Ukuhlala kwakhona ngotyalo-mali eGeorgia, kunokuchazwa njengokufumana indawo yokuhlala yaseGeorgia ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseGeorgia ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, neshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sokuhlala ngokutyala imali kwiGeorgia, ukuhlala kwenkqubo yotyalo-mali yaseGeorgia ixhaswe kukuhlala ziinkonzo zotyalo-mali eGeorgia, ngokuhlala kwethu okugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eGeorgia, eyona ndawo yokuhlala iphambili ngamagqwetha otyalo-mali eGeorgia kunye nokuhlala okungcono ngabacebisi botyalo-mali baseGeorgia, abasebenza kwindawo yokuhlala efanelekileyo ngabameli botyalo mali eGeorgia, kunye neefem eGeorgia.
Ukuhlala kwakhona ngeenkonzo zotyalo-mali eGeorgia | Ukuhlala kwakhona ngabameli botyalo mali eGeorgia | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eGeorgia | Ukuhlala kwakhona ngamagqwetha otyalo mali eGeorgia | Ukuhlala kwakhona ngabacebisi botyalo mali eGeorgia
Ithini inkcazo yokuba ngummi ngotyalo-mali eGeorgia?
Ubummi ngotyalo-mali eGeorgia, bunokuchazwa njengokufumana ubumi baseGeorgia ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseGeorgia ngeendlela ezahlukeneyo ezinje ngeshishini, izindlu nomhlaba, iibhondi zikarhulumente, njl njl. Faka isicelo sokuba ngummi ngotyalo-mali eGeorgia, ubummi ngenkqubo yotyalo-mali yaseGeorgia exhaswa bubummi ngeenkonzo zotyalo-mali zaseGeorgia, ngobona bumi bethu bubugqwetha ngamagqwetha otyalo-mali eGeorgia, ubumi obugqwesileyo ngamagqwetha otyalo-mali eGeorgia kunye nobumi obugqwesileyo ngabacebisi botyalo-mali baseGeorgia, abasebenza ubumi obugqwesileyo ngabameli botyalo mali eGeorgia, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eGeorgia.
Iinkonzo zongeniso lwabatyali mali ezifikelelekayo eGeorgia | Amaxabiso afikelelekayo okufudukela eGeorgia | Utyalomali olufikelelekayo lwamagqwetha eGeorgia | Utyalomali olufikelelekayo kumagqwetha eGeorgia | Abatyali mali abafikelelekayo kubaphambukeli eGeorgia | Iifemu zomthetho wofuduko ezingenaxabiso eGeorgia
Ithini inkcazo yepasipoti yesibini eGeorgia?
Ipasipoti yesibini eGeorgia, inokuchazwa njengokufumana ubumi baseGeorgia ngokusemthethweni ngokutyala imali kuqoqosho lwaseGeorgia ngeendlela ezahlukeneyo ezifana, izindlu nomhlaba, ishishini, iibhondi zikarhulumente, njl. Faka isicelo sepasipoti yesibini eya eGeorgia, inkqubo yesibini yokundwendwela yaseGeorgia exhaswa Iinkonzo zokundwendwela zesibini eGeorgia, ngamagqwetha esibini eepasipoti eGeorgia, amagqwetha esibini eepaspoti eGeorgia kunye nabacebisi beepaspoti besibini eGeorgia, abasebenza kwiiarhente zokundwendwela zesibini eGeorgia, kunye neefem zokubonisana zokufudukela eGeorgia.
Iinkonzo zokundwendwela yesibini zeGeorgia | Iiarhente zokundwendwela zesibini eGeorgia | Amagqwetha esibini epasipoti eGeorgia | Amagqwetha esibini epasipoti eGeorgia | Abacebisi bokundwendwela besibini eGeorgia
Yintoni inkcazo yevisa yegolide eGeorgia?
I-visa yegolide eGeorgia, inokuchazwa njengokufumana imvume yokuhlala eGeorgia ngotyalo-mali kuqoqosho lwaseGeorgia ngeendlela ezahlukeneyo ezinje, iibhondi zikarhulumente, ishishini, izindlu nomhlaba, njl. Faka isicelo sevisa yegolide eGeorgia, inkqubo yegosa yegolide yaseGeorgia exhaswa yi Iinkonzo zevisa ezimnandi zeGeorgia, ngokusebenzisa amagqwetha egosa eVisa aseGeorgia, amagqwetha egosa eG visa aseGeorgia kunye nabacebisi begosa abagqwesileyo ngeGeorgia, abasebenza kwiiarhente zevisa zegolide eGeorgia, kunye neefem zokubonisana nabantu abafudukela eGeorgia.
Iinkonzo zevisa ezimnandi zeGeorgia | Iiarhente zevisa ezimnandi eGeorgia | Amagqwetha egosa egolide eGeorgia | Amagqwetha egosa egolide eGeorgia | Abacebisi begosa begolide baseGeorgia
Luthini olona tyalo mali lincinci lokuba ngummi ngokutyala eGeorgia?
Ubuncinci botyalo-mali kubuZaleli ngotyalo-mali eGeorgia yi-USD 125,000 (ilingana ne-300,000 GEL).
Ngaba uyayinika inkxaso yezomthetho iGeorgia yobumi bobuzwe ngotyalo-mali?
Ewe, igqwetha lethu eGeorgia kunye neearhente eGeorgia zibonelela ngenkxaso yokuba ngabemi ngotyalo-mali eGeorgia.
Ngaba ubummi ngotyalo mali lwaseGeorgia lubiza imali eninzi?
Iindleko zoBummi ngoTyalo-mali eGeorgia kunye nobummi ngeemfuno zengxowa mali yotyalo-mali yaseGeorgia yeyabantu abaphezulu abaxabisekileyo, sihlawulisa kuphela umrhumo wokubonisana ngobumi ngotyalo-mali ukuya eGeorgia, sikwabonelela ngenkxaso-mali eninzi yokuba ngabemi bobuRhulumente ngezisombululo zotyalo-mali.
Leliphi ilizwe labahlali abanokufaka isicelo sobumi ngokutyala imali kwi-Georgia okanye nge-visa yomtyali mali ukuya eGeorgia?
Ubummi beenkonzo zotyalo-mali ezinokuthi zisetyenziswe ngabemi beliphi ilizwe kodwa imizekelo embalwa bubummi ngotyalo-mali ukuya eGeorgia ukusuka e-Asiya, ukuba ngummi ngokutyala imali ukuya eGeorgia ukusuka e-Afrika, ukuba ngummi ngotyalo-mali ukuya eGeorgia ukusuka eYurophu, ukuba ngummi ngokutyala imali ukuya eGeorgia ukusuka eMzantsi Melika, Ubummi ngotyalo-mali eGeorgia usuka eMalaysia, Ubummi ngotyalo-mali eGeorgia usuka eBangladesh, Ubummi ngotyalo-mali eGeorgia usuka eIndonesia, Ubummi ngotyalo-mali eGeorgia usuka eSri Lanka, Ubummi ngotyalo-mali eGeorgia usuka eNepal, Ubummi ngotyalo-mali eGeorgia usuka eIndiya naseBummi ngotyalo-mali ukuya eGeorgia ukusuka e-UAE.
Ubumi bobuGcisa ngesiKhokelo kuTyalo mali yeGeorgia
Cela ukubonisana simahla kubumi bakho ngoTyalo mali eGeorgia
Amagama abalulekileyo kubumi ngoTyalo mali lwaseGeorgia
Icandelo loMphathiswa Wenkcubeko Nemidlalo yaseGeorgia
IKomiti yokupheliswa kobuCalucalulo bobuhlanga (CERD)
Icandelo loMphathiswa Wezoqoqosho Nophuhliso Olunozinzo e-Georgia
Icandelo loMphathiswa Wezemfundo kunye nesayensi ye-Georgia
Icandelo loMphathiswa Wabantu Abalahliweyo Bangaphakathi abasuka kwiindawo eziSebenzayo, indawo yokuhlala kunye neembacu zaseGeorgia
UMphathiswa wezeMali waseGeorgia
UMkhuseli woLuntu waBaxhamli abanomdla
Ikomiti yokupheliswa kocalucalulo ngokuchasene nabafazi (CEDAW)
Inkonzo yoKhuseleko lweLizwe laseGeorgia
Icandelo loMphathiswa Wezokhuselo lweNdalo kunye nezoLimo eGeorgia
Inkundla yomgaqo-siseko wase-Georgia
Inkundla ePhakamileyo yaseGeorgia
IKomiti yamaLungelo oLuntu (CCPR)
INkundla yezoBulungisa yamazwe ngamazwe (ICJ)
IKomiti ngokuchasene noxinzelelo (CAT)
IKomiti yaMalungelo oMntwana (CRC)
Inkonzo yoNcedo lwezoMthetho
Icandelo loMphathiswa Wezoluleko kunye nokuGqibela eGeorgia
IBhunga eliPhezulu lezoBulungisa laseGeorgia
IOfisi yoMhloli woKhuseleko lweDatha yaBantu baseGeorgia
Icandelo loMphathiswa Wezokhuselo eGeorgia
Umbutho woKhuseleko kunye neNtsebenziswano eYurophu
Ikomiti yaseYurophu yamalungelo oluntu
IKomiti yaMalungelo oQoqsho, ezoluntu neNkcubeko (i-CESCR)
Inkundla yezibheno yaseTbilisi
Icandelo loMphathiswa Wezabasebenzi, elezeMpilo nezeMicimbi yezeNtlalo
Icandelo loMphathiswa Wezophuhliso Lwengingqi kunye neZiseko zophuhliso zaseGeorgia
IKhansile yoMkomishinala Wamalungelo Abantu BaseYurophu
IOfisi kaMphathiswa woMbuso woXolelwaniso kunye nokuLingana koLuntu
IKomiti yaMalungelo aBantu abaKhubazekileyo (CRPD)
IPortal Aid Legal Portal
Icandelo loMphathiswa Wezoluleko laseGeorgia
IKhomishini yaseYurophu ngokuchasana nobuhlanga kunye nokungakhathali (i-ECri)
IOfisi yomtshutshisi eGeorgia
IKomiti yokuKhuselwa kwaMalungelo aBasebenzi Bonke abafudukayo kunye naMalungu eentsapho zabo (CMW)
Umkhuseli woLuntu lwaseGeorgia
Ikomiti yaseYurophu yokuThintela ukuThwala kunye noNyango okanye unyango olubi okanye uhlazo (CPT)
IYUNITHI YAMALUNGELO OLUNTU YAMALUNGELO OLUNTU
UMkomishinara oMkhulu weZizwe eziManyeneyo wamaLungelo oluNtu
Iiarhente zikarhulumente kunye nemibutho engekho phantsi korhulumente ngokuchasene nobundlobongela basekhaya
Hlanganisa kwi ISebe lokuFudukela eGeorgia , linoxanduva lokuqulunqa imigaqo-nkqubo yokukhawulezisa uMfuduko eGeorgia